सिल्टल: बेस्ट वेब स्क्रैपर अनलाइन डेटा निकाल्नका लागी
सामग्री स्क्रैपिंग वा वेब स्क्रैप प्रयोग गर्ने प्रक्रिया हो विशेष सफ्टवेयर वा वेब अनुप्रयोगको वेबसाइटबाट सामग्री प्रशोधन गर्न. वेबमास्टरहरू र विकासकर्ताहरूलाई अपील गर्ने स्क्रिप्टहरू जुन अन्य साइटहरूमा अवस्थित जानकारीको लागि द्रुत स्वत: पहुँच प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ.
सामग्री स्क्रैपिंग अनुप्रयोगहरु
वेब मार्केटिंग को लागी दुर्भाग्य देखि ईमेल विपणन को उपयोग गर्न को लागि स्पैमिंग , र robocalls. यसको कारण, धेरै भन्दा वेबमास्टरहरू यसलाई टाढा राख्न चाहन्छन्. तथापि, यदि नैतिक वेब स्क्रैपिंग गरे भने विभिन्न वेब परियोजनाहरूबाट लाभ उठाउन धेरै शक्तिशाली तरीका हुन सक्छ.
कसरी स्क्रैपिंग प्रयोग गर्न सकिन्छ
क्षेत्रमा सबै होटलहरूको अनलाइन डाइरेक्टरीलाई विचार गरौं।. यदि एक वेबसाइट डेभलपरले प्रत्येक र हरेक होटललाई जम्मा गर्न चाहन्छ भने, उसले उनीहरूलाई डेटाबेसमा म्यानुअल रूपमा समावेश गर्नुपर्छ. यो प्रक्रिया सामान्यतया दसैँ घण्टाको लागी लाग्छ कि यो देशमा हरेक होटल समावेश छ. एक वेब स्क्रैपर को साथ, त्यहि वेबमास्टरले खोज प्रश्नहरू इनपुट गर्न सक्छ र विभिन्न डेटाको विभिन्न प्रकारबाट डेटा सङ्कलन गर्न सक्छ।.
वेब स्क्रैपर को निर्माण या किन्नुहोस?
यदि तपाइँ वेब स्क्रैपिंग उपकरण चाहानुहुन्छ भने, तपाईं स्क्रिनबाट एउटा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ वा पहिले नै अवस्थित एक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. अधिक विकासकहरूसँग आवश्यक कौशलहरू, ज्ञान, उपकरणहरू, वा स्रोतहरू छैनन् स्क्रैपिङ उपकरण उपकरण निर्माण गर्न।. सुसमाचार यो छ कि त्यहाँ दर्जन भन्दा पूर्व निर्मित स्क्रैपर्सहरू छन्.
वेब स्क्रैपिंग सफ्टवेयरमा प्रविधिहरू र प्रविधिहरू
यदि तपाईं आफ्नो स्क्रैटर निर्माण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले डेटा जम्मा गर्न कुन टेक्नोलोजीहरू समावेश छन् भनेर बुझ्न आवश्यक छ. धेरै स्क्रैपर्स HTML सँग बनाइएका छन्, DOM पार्सिङ प्रयोग गर्दै (कागजात ऑब्जेक्ट मोडेल लाई पार्स गर्दै) HTML मार्फत फिल्टर गर्न केवल वांछित जानकारी निकाल्नका लागि।. तपाइँलाई विभाजन गर्न चाहानु भएको डेटाको डिभ, स्प्यान, क्लासहरू, र सूची वस्तुहरू पहिचान गर्न अनि तपाइँका सेटिङहरूमा इनपुट गर्न चाहनुहुन्छ।.
मोजेन्डा स्क्रैपर एक ब्राउजर जस्तै एक वेब ब्राउजर को लागी एक विशिष्ट ब्राउजर रेन्डिंग टेक्नोलोजी को उपयोग गर्दछ. तपाईं आवश्यक डाटा भेला गर्न effortlessly एक साइट भित्री पृष्ठ मार्फत ब्राउज गर्न यसलाई प्रयोग. AJAX र जाभास्क्रिप्ट प्रयोग गर्दै, मोजाडा नेभिगेसनहरू र कार्यहरू स्थापना गर्दछ, साथसाथै उनीहरूका लागि तिनीहरूलाई स्वचालित बनाउँछ Source .